China Yaskawa ukutshiza irobhothi MOTOMAN-MPX2600 mveliso kunye nabenzi | Jiesheng
Zenzekelayo ukutshiza Robot Inkcazo:
Ukusetyenziswa kwe Ukutshiza iRobot Motoman-Mpx2600 yaseYaskawa Kuquka ukuSebenza nokuFafaza. Amacandelo ezicelo aquka ukutshiza ngeemoto, ukutshiza ngeTv, ifowuni yokutshiza ngeplastikhi, ukutshiza ngezixhobo zeplastikhi, njl.njl.Yamkela ingalo enkulu engenanto, i-6-Axis nkqo Udidi oluDibeneyo, Umthwalo omkhulu we-15kg, kunye Uluhlu oluphezulu lweMotion Of 2000mm. Izixhobo ezitshiziweyo ezincinci nezincinci zinokufakwa ukufezekisa ukutshiza okuphezulu.
Inkqubo ye- I-Yaskawa yokuFafaza ngeRobhothi Mpx2600 Yamkela iKhabhinethi eLawulayo eNcinci edityaniswe ziiyunithi ezifanele kakhulu ukuSebenzisa. Ukuphakama kwayo malunga ne-30% kuncinci kuneModeli yoqobo, kwaye inemigangatho yokufundisa isijingi kunye nokuqhushumba-Ubungqina bokufundisa isijingi kwiindawo ezinobungozi.
Iinkcukacha zobugcisa ze Zenzekelayo ukutshiza Robot:
Inkqubo ye- Zenzekelayo Ukutshiza Robot Mpx2600 Ngaba Ukuqonda Ukutshiza Okrelekrele, Imveliso eguqukayo, ukuSebenza ngokuPhezulu okuPhezulu, ukuSonga okungafaniyo kweemveliso ezivelisiweyo, kwaye iRobhothi kulula ukuSebenza nokuGcina. Sisincedisi esifanelekileyo sokuSebenza ngokuSebenzisa amashishini.
Egqithileyo Ipeyinti yeYaskawa Robot Motoman-Mpx1950
Okulandelayo: Ukupeyinta iYaskawa Robot Motoman-Mpx3500
Imoto yokuPenda iRobhothi
Ukupeyinta iRobot Arm
Ukupeyinta Ixabiso leRobot
Ipeyinti yeRobotic Arm
Umatshini wokupeyinta iRobotic
I-Robot yokuPenda eyiSmart
Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis,